ဟယ်လို! ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳသင်ျပုံပြင် ၂။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင္သြင္းဖွဲ့သည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲခဲ့သည့်လအနည်းငယ်ကျော်သွင်းထားရန်အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်များအတွက်။ သင်ျပုံပြင် ၂ ပထမဦးဆုံးချွတ်စတင်အဖြစ်စိတ်ကူးတစ်ခုပြန်၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၅:ဒါဟာယခုနောက်ဆုံးအချိန်ထားရန်အဘို့အအွန်လိုင်းကလောကဓာတ်လုံးကိုပျော်မွေ့! ဆိုရင်ဖျားနာပြီးမောပန်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသောရိုးရိုးထိဘူးအစက်အပြောက်၊ကျွန်တော်ထင်ခင်ဗျားချစ်သွားရန်လည်းမရှိအရာရာကိုချစ်ကြောင်း IS၂။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောငါတို့၏ဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုအမျိုးအစားရှိသည်နှင့်အနည်းငယ်သာသံသယဖြစ်နေတာများတူညီသောလမ်းခံစားရတဲ့အခါသင်ဝန်ကတက်သည်။, တိကျသောကြိုတင်ပြီးအချိန်ကိုတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ကစားခြင်းဤကွီးစှာသောမိသားစု-အာရုံလိင်ဂိမ်းခေါင်းစဉ်ကိုလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်မျှမဒါင္းလိုအပ်! ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ခေတ်သစ်စားသုံးသူ၊အထားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်အနေအထားများကိုမိတ်ဆွေကဲ့သို့သင်ဝင်ရောက်ဖို့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။ ဘယ်မှာအခြားခေါင်းစဉ်များပြိုလဲပြီးစစ်ပေး၊ကျနော်တို့အကောက်လျှော့ပြီးရှာပေးသင်လက်လှမ်းမီနှင့်အတူကြီးမားတဲ့အရေအတွက်အစိုင်အခဲၾကာင္းသင်ျဂိမ်း။ ယူကတိပေးဖို့သင်တို့နှင့်အတူဘဏ်မှအလွန်း–ပဲကစားနှင့်ကိုယ်အဘို့ထဲကရှာတွေ့!
ဒါဟာသိသာဖြစ်လာအတွက်အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်း ၂၀၀၀ ညမ်းသောဂိမ်းများအမြဲဆင်းရဲခံရသည့်တိုင်အရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်များကိုရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကတည်းကအမြင်အာရုံ၏ဒြပ်စင်ဒီဂိမ်းသည်ဒါအရေးကြီးပါတယ်၊ကျနော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်ပတ်ပတ်လည် ၅၀%ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်သို့အနုပညာနှင့်အင်ဂျင်ဇိုင်နာများအရအဆိုပါဂိမ်းကိုကြည့်ကြယ်။ ကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်အကြောင်းယုံကြည်အဖြစ်အမှုအရာအဆင္ေမတ်တပ်ရပ်၊ကျနော်တို့ကအများဆုံးအမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ် XXX ခေါင်းစဉ်စျေးကွက်အပေါ်။ ပေါ်လာတဲ့နင့္ကိုအရာအားလုံးလျှင်၊ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အရှာနေသင်ျဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာရှိကြောင်းကြီးမားတဲ့ slant မျက်နှာသို့အမြင်အာရုံအပျော်အပါးများ၊သင်ျပုံပြင် ၂ ကဒီမှာအပေးအတွေ့အကြုံ။, ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်သွားဖို့မျှော်လင့်သေချာသောဂရပ်ဖစ်အမြဲကြည့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးအပေါ်ကောင်းစွာဆို။ သင်ပင်ပြေးသင်ျပုံပြင် ၂ အပေါ်တစ်ဦးစံမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ချင်တယ်ဆိုရင်–နည္းပညာရှူ့ GPU နှင့်္ခ််ိန္ညႇ်ိခ်က္ယင်ကောင်အပေါ်ကြောင်းသေချာစေရန်အရာအားလုံးအကြီးအကြည့်အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲသင်ပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း။ အိုး၊နှင့်ကျနော်တို့လျှောက်ထားထေးဖို့ပုံမှန်သေချာအောင်သင်သုံးစွဲသောကြယ်ပြာအတွေ့အကြုံအတွက်ဂိမ်းကစားကမ္ဘာ့ဖလားသင်ရရှိလာဖို့မျှော်လင့်!
နေတယ်ဆိုရင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကြိုက်တဲ့ရည်မှန်းချက်မျက်နှာသို့အလုပ်လုပ်ရန်၊အဆိုပါအောင်မြင်မှုစနစ်ထဲမှာသင်ျပုံပြင် ၂ အကယ်စင်စစ်သွားအောင်သင်အလွန်ပျော်ရွှင်အမှန်ပင်။ အခုချက်ချင်း၊ကျနော်တို့ ၁၁၁ ထူးခြားသောအောင်မြင်ရန်အဘို့အသော့။ အချို့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့–ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်စုဆောင်း$၁၀၀–သော်လည်းအခြားသူများဝေးပိုပြီးခက်ခဲပြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်မှသော့ဖွင့်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သောဤအမည်နှင့်တကွသင်ပေးတဲ့သဘောမျိုး replayability ချင်ကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏။ သင်ထိပ်တန်းအတွမ်၏အောင်မြင်မှုများ? အဘယ်သူမျှမကစားခဲ့သူသင်ျပုံပြင် ၂ ကအတော်လေးစီမံခန့်ခွဲလုံး ၁၁၁–သင်အလွန်ကောင်းစွာပထမဦးဆုံးဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီရန်ဤသို့ပြု!, မှတ်ချက်မှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်၊အောင်မြင်မှုများလည်းသော့အစည်း၏အထူးအင်္ဂါရပ်။ ဤပါဝင်သည်အားလုံးအသစ် NPCs၊အဆုံးသတ်ရေး storylines၊စတည်နေရာနှင့်ပို။ ထင်၏အောင်မြင်မှုများစနစ်အဖြစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့ဂိမ်းအလုပ်အဖြစ်စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ မိမိကိုလျစ်လျူရှုဖို့အခမဲ့ဤရွေးချယ်မှုများ၏အရှိန်မြင့်၏တိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုဧရိယာ၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်အတွက်အသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးအကျိုးကိုအမှန်တကယ်သူတို့နှင့်သွားစမ်းကြည့်ပေးပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ျပုံပြင် ၂ ပြေးရသည်ဖြောင့်၏၊ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်သင်အမြဲချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုဆာဗာများ။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်မည်သည့်တိုးတက်မှု(သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်စူးစမ်းဖို့ကွဲပြားခြားနားသောစကားရွေးချယ်စရာ)နှင့်ဂိမ်းစီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်အားလုံးသင်တို့အဘို့အကြောင်း။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်မေ့လျှင်ကယ်ဖို့၊သင်ဆဲတတ်နိုင်သမျှဖြောင့်ခုန်ပြန်အရေးယူသို့အဆုံးရှုံးသွားမပါဘဲသင်သည်သင်၏တိုးတက်မှု။ မိုဃ်းတိမ်ကယ်တင်ပြိုင်ဖြတ်အားလုံးသည်ထုတ်ကုန်များ၊အကယ္၍ကစား၏မိုဘိုင်းအပေါ်တစ်နေ့နှင့်ကွန်ပျူတာအနောက်၊သင်ဆဲကစားအတူတူအကယ်။, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုဆင်းသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ရန်ဤလမ်းကြောင်းကိုသေချာသင်အကြောဂိမ်းကစားမရတိုများချက်ချင်းလက်ငင်းလက်လှမ်းသောအကြောင်းအရာသင်ရှာ။ မိုဃ်းတိမ်သည်အသစ္တစ္လံုးအနာဂတ်–အထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးအာကာသအခါလူအလျင်အမြန်နီးကပ်သူတို့ရဲ့ဘြတ္တစျအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အခြား။ ကျွန်တော်ထင်၏ဤအစတိုင်ဂိမ်းဖြစ်သင့်သည်အဆင့်အတန်းနှင့်ဂုဏ်ယူကြသည်တစ်ဦးအဖြစ်ရှေ့ဆောင်ယိုအာကာသအတွင်း။ ပြားရှိနေရန်အဘယ်အရပ်မှလာ!
စိတ်ကြိုက်အရေးကြီးသည့်ဉာဉ်ဆိုးသည်ငါတို့အဘို့၊အဘယ်ကြောင့်သောအများအပြည့်အဝဖက်ဆာဗာပိုင်း–ႏဖိုရမ်–မြှုပ်နှံဖို့ထုံးစံဂုဏ်ယူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အလွန်အကျွံငွေပမာဏ၏ကိရိယာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်တပ်ဆင်ခနှင့်အပြင်၌၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သောလူမျိုးများကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်ယူစွာသင်တပ်ဆင်ရန်အဘို့အသုံးပြုရန်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုၾကည့္ရန္စနစ်ပြီ၊ဂုဏ်ယူပြိုင်ဖို့အသင့်ပရိုဖိုင်းနှင့်ဖွင့်ဖို့လွယ်ကူသောအပေါ်နှင့်ပယ်အပေါ်မူတည်ပြီးဘာအတွေ့အကြုံရှိသည်ချင်။, လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာဂုဏ်ယူစွာကျနော်တို့အချိန်တွင်အကောက်ခွန်ဇာတ်ကောင်များ–သင်စာသားအတိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်မည်သည့်ထည့်သွင်းမွာက္သည္သင်တို့အလိုပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့အတိအကျလိုအပ်ချက်များကို! ဖန်စီရှိခြင်းမှတ်တမ်းတင်ရှိခဲ့ရိဒ်ဖြစ်၏ခြေလှမ်း-အစ်? အဘယ်သူမျှမပြဿနာ! တစ်စုံတစ်ဦးကဖန်တီးတဲ့ကိရိယာကိုဤသို့ပြုတိပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်။ ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်၏ခွင့်ပြုထုံးစံဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခံရသင့်သောလွှတ်ပေးရန်အတွက်နောက်လအနည်းငယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ကစားဖို့သင်ျပုံပြင် ၂၊သေချာသည်!
ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်နှင့်ခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးသင်ျညမ်းဂိမ်းစျေးကွက်အပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်! သင်သည်ရှက်ကြောက်မည်မဟုတ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ–အာမခံချက်! စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစား။